Bullying - Pejy fandokoana maimaim-poana ho an'ny ankizy
Sexting - Tendriky ny virtoaly zanatsika
Taorian'ny andrana efatra dia naka ny sary tonga lafatra i Anna. Ny volonao dia mikatso moramora eo an-tsorokao, ny molotrao masiaka dia aseho tombony - toy ny bra-tosika vaovao. Mahafatifaty nefa tsy dia mora loatra raha ny heviny. Mandefa ny sarinteny akaiky izy ary miandry fatratra ny fihetsiky ny olona.
FIVAROTANA TREND ONLINE - Ny striptease virtoaly
Avy amin'i Meike Stephan
Anna, izay tsy mitovy amin'ny tena anarany dia telo ambin'ny folo taona ary manina ny sakaizany. Manao vakansy mandritra ny roa herinandro sy kilometatra an-jatony maro izy. Matahotra izy fa hanadino azy mandritra izany fotoana izany izy, te hampahatsiahy azy ny fotoana iarahana. Mandefa selfie mampiharihary azy toy ny ataonao izy ankehitriny.
Sary akaiky fa tsy taratasim-pitiavana
"Sexting" - fitambaran'ny teny roa "sex" sy "sms", dia mamaritra ny fakana sary sy ny fandefasana sary erotika amin'ny alàlan'ny fitaovana elektronika.
Mitandrema amin'ny selfie - sary avy amin'i Eugenio Cuppone amin'ny pixel
Mihamaro ny tanora mampiasa finday avo lenta, takelaka sy ny toy izany handefasana sary manokana momba azy ireo. Iza no maniry taratasim-pitiavana manafintohina rehefa afaka miteny bebe kokoa amin'ny sary ianao?
Whatsapp sy Snapchat dia malaza indrindra amin'ny sarin'ny tena akaiky. ny Ny fandalinana aostraliana momba ny sexting eo amin'ny tanora dia nampiseho fa ny 30 isanjaton'ny valinteny rehetra eo anelanelan'ny 14 sy 18 taona dia efa manana traikefa amin'ny fifampiresahana finday. Betsaka no efa nandefa ny sarin'izy ireo miboridana. "Sexting - Ny volon-tsivana virtoaly ho an'ny zanatsika" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fampianaranaKeywords Cyberbullying, mobbing, Resaka an-tserasera, Fisorohana, ny fiainana manokana, Hafatra VetavetaLeave a Comment amin'ny sexting - ny volon-tsivana virtoaly zanatsika